Afarta Heshiis | Martech Zone
Monday, June 4, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Caawa waxaan la sheekaysanayay saaxiibkay, haraaga. Jules wuxuu u gudbiyay xoogaa xigmad ah buugga, The Four Agreements, ee uu qoray Don Miguel Ruiz & Don Jose Luis Ruiz.
Sida talooyinka badankood, waa wax aasaasi ah, laakiin way adag tahay in lagu dhaqmo. Nolosheena maalinlaha ah waxay umuuqataa inay iska fogeyneyso awoodeena inaan waxyaalahan oo kale ku heyno. Laga yaabee maadaama ay afar kaliya tahay, waan gaari karnaa, in kastoo!
1. Noqo mid aan fiicnayn Eraygaaga
Si daacadnimo leh ula hadal Kaliya sheeg waxaad ujeedo. Ka fogow adeegsiga ereyga si aad uga hadasho naftaada ama aad uga xanto dadka kale. U adeegso awooda eraygaaga jihada runta iyo jacaylka.
2. Waxba Ha Qaadin Shakhsi Ahaan
Waxba ma jiraan wax kale oo adiga ah. Waxa ay dadku sheegaan oo ay sameeyaan waa saadaashooda dhabta ah, riyadooda. Markaad difaacdo fikradaha iyo ficilada dadka kale, ma noqon kartid dhibbanaha silica aan baahnayn.
3. Ha Sameyn Malo
Raadi dhiiranaan si aad u weydiiso su'aalo iyo muujiso waxa aad rabto. La hadal dadka kale si cad si aad uga hortagto is faham la'aan, murugo iyo riwaayad. Iyada oo kaliya hal heshiis, waxaad si buuxda u bedeli kartaa noloshaada.
4. Markasta Samee Inta Ugu Fiican
Kii ugu fiicnaa ayaa isbeddelaya daqiiqad ilaa daqiiqad; way ka duwanaan doontaa marka aad caafimaad qabtid si ka duwan kuwa jiran. Xaalad kasta ha noqotee, si fudud ku dadaal sida ugu fiican, waxaadna ka fogaan doontaa is-xukun, is-xumeyn iyo qoomamo.
Talada cajiibka ah. Waxaan u maleynayaa inaan # 1 hoos udhacay, # 4 kudhowaad halkaas… # 2 Waan kufiicanahay, maadaama aan isku kalsoonahay naftayda. # 3 wuxuu ubaahan yahay xoogaa shaqo ah! Waad ku mahadsan tahay Jules inaad tan u gudbiso! Waxaan hayaa xoogaa shaqo ah inaan sameeyo.
PHP: SimpleXML Miyuu Shuban Yahay?
I soo wac markaad Beta ka baxdo, Google Gears!
Jun 5, 2007 saacadu markay ahayd 6:29 AM
Talo aad u fiican, Doug. Inta badan talobixinta akhlaaqda waxtar leh way fududahay, oo sidaad u leedahay, way adag tahay.
Jun 5, 2007 saacadu markay ahayd 7:20 AM
Doug. Waxay u egtahay buug xiiso badan. Akhriste ma ka aqrisay? Ma mudan tahay qiimaha gelitaanka mise waxaad ku soo koobtay jawharadaha halkan ku yaal boostadaada?
Dhab ahaantii afar astaamood oo lagu dadaalayo. Iyo, ka dibna si toos ah ula xiriir blogging.
Jun 5, 2007 saacadu markay ahayd 8:05 AM
Dhowr jeer ayaan akhriyay buuggan oo wuxuu ahaa mid nolosha beddelaya markii ugu horreysay, noloshu waxay xaqiijineysaa waqti kasta oo kale. In kasta oo mabaadi'da ay fududahay, in si dhab ah loogu dhaqmo (qoto dheer) nolosheena shaqsiyeed iyo xirfadeed waxay qaadataa edbinta iyo rabitaanka joogtada ah ee is-hagaajinta. Hadda, in kasta oo aan runtii ka walaacsanahay dhinaca shakhsi ahaaneed iyo balooggan ee cinwaanada Doug ee dhinaca xirfadda / farsamada badan ee nolosha, wareeggayaga saameynta ayaa ah sida ugu weyn ee aan dooneyno inuu noqdo. Afarta heshiis ayaa lagu ballaariyay buugga dhexdiisa wuxuuna u sharxayaa macno aad u qoto dheer heshiis kasta.
Bilowga buuggu xoogaa ayuu jiitaa, laakiin markii uu galo "hilibka" dhexdeeda, waa la beddelay… ka dibna waa la beddelay. Haddii qof kastaa isticmaali karo mabaadi'daas, annaga doonaynin adduunka beddel.
Jun 5, 2007 saacadu markay ahayd 8:32 AM
Xaqiiqdii waxay ku qoran tahay liistadayda gaaban ee buugaagta la akhriyo, Dawud! Marnaba kama aanan fikirin baloog garaynta (duh!), Laakiin adigu waad saxantahay - waa talo weyn oo loogu talagalay dadka wax qora.
hmm… .probaly waa inaan si adag ugu shaqeeyaa qodobka # 2 🙁
Waa run inay tan aad u adag tahay. Way ku caawin kartaa inaad uga fikirto sidan. Cidina kaaama dhigi karto wax aanad ahayn. Marka, haddii aad iigu yeerto magacyo ama aad wax xun iiga sheegto naftayda, runti waa inaysan saameyn ku yeelan sida aan isku fiiriyo - HADDII aan ku kalsoonahay shaqsiyan. Halkaas ayaa dhibaatada ka jirta. Waxaan u ogolaaneynaa aragtida kale ee naga qabaan inay saameyn ku yeelato sida aan nafteenna u aragno, halkii aan iska aqbali lahayn ama aan beddeli lahayn waxyaabaha aanan jeclayn si fudud b / c waxaan rabnaa. Waxa aad rumeysantahay badanaa wey miro dhalayaan. Ka fikir naftaada waxyaabo togan naftaada waana jeclaan doontaa naftaada; ka fikir waxyaabo xun oo aadan jeclaan doonin naftaada.
Haa, waa laygu eedeeyey inaan ahay Pollyanna'ish …… laakiin waa qodob noloshayda hagaya waana mid si fiican iigu adeegaysa, gaar ahaan maanta. 🙂
Jun 6, 2007 saacadu markay ahayd 4:18 AM
talo weyn jule 🙂
Waxyaabaha xun xun ee internetka lagu dhaho waa wax fudud. Kaliya ku qor wax kasta oo aad rabto sanduuqa faallooyinka… ..
Dadku xitaa kama fakaraan saameynta ay ku yeelan karto blogger-ka…. 🙁
“Ka fikir naftaada waxyaabo wanaagsan oo aad naftaada jeceshahay; ka fikir waxyaabo xun oo aadan jeclaan doonin naftaada. ”
Waxaan si rasmi ah u raacayaa taladaada 🙂
Jun 6, 2007 saacadu markay ahayd 7:33 AM
Kuma talin karo buugan ku filan - waa akhrin sahlan, oo mudan in mar labaad la akhriyo si maskaxdaadu toos ugu noqoto. Buuggan waxaa la i siiyay dhowr sano ka hor markii aan marayay "balastar adag" waxayna iga caawisay inaan dib isu soo qaado. # 2 Wax Ha u Qaadan Shakhsi ahaan waxay igu yeelatay saameynta ugu weyn aniga oo iga caawinaya dareenka nafteyda.
Talo soo jeedin wanaagsan, Doug!
Shimbiraha Duurjoogta Aan Xaddidnayn
Jul 13, 2007 markay tahay 1:55 PM
Xaqiiqdii haddii aad jebineysid heshiiska # 2 ama # 3 sidoo kale adigu ma noqonaysid mid Impeccable la ah eraygaaga (heshiiska # 1).
Haddii aad shaqsi ahaan wax u qaadanaysid markaa waxaad sameyneysaa hadal liddi ku ah naftaada shucuur ahaan. Tani ma ahan mid aan fiicnayn. Haddii aad samaynaysid (maskaxdaada ka abuureyso) fikrado u horseedaya xurmo-xumo markaa adigu sidoo kale ma tihid qof aan fiicnayn.
Muujinta ereyga aan fiicnayn ee ereygaagu sidoo kale wuxuu u baahan yahay inaad sameyso fikrado si aan fiicnayn, iyo inaadan sameynin tibaaxaha kugu kalifaya inaad waxyaabo shakhsi ahaan u qaadato
Marka ugu horraysa ee la akhriyo waxay u muuqataa in Imperccable uu ka fudud yahay kuwa kale. Markaad barato qodobbada wanaagsan waxaad ogaaneysaa in heshiisyada nolosha ee # 2,3, iyo 4 ay kuu horseedayaan inaad gaarto Impeccability.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tan at http://pathwaytohappiness.com/happiness/2007/01/19/be-impeccable-with-your-word/